नौ महीनामा वैदेशिक व्यापार | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण नौ महीनामा वैदेशिक व्यापार
चालू आर्थिक वर्ष (आव)को ९ महीनाको कुल वैदेशिक व्यापारमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकअनुसार चालू आवको प्रथम ९ महीनामा रू. १०६१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिमा भएको रू. ८७२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको तुलनामा करीब २२ प्रतिशतले बढी हो । निर्यातमा भने तुलनात्मक रूपमा सुधार आउन सकेको छैन । गत वर्ष यस अवधिमा रू. ५९ अर्ब ७४ करोडको निर्यात भएकोमा यस वर्ष रू. ६९ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको निर्यात भई १६ दशमलव ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । व्यापारघाटा यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा करीब २२ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
चालू आवको ९ महीनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको आयात भएको मालवस्तु पेट्रोलियम तथा कोइला शीर्षक अन्तर्गत रहेको छ । यसको आयात मूल्य रू. १८२ अर्ब ४४ करोड रहेको छ भने गत वर्ष आयात मूल्य रू. १३५ अर्ब ३ करोड रहेको थियो । आयात वृद्धिदरका हिसाबले करीब ३५ प्रतिशतले आयातमा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा पेट्रोलियम तथा कोइला शीर्षकको हिस्सा कुल आयातमा करीब १७ प्रतिशत रहेको छ । प्रमुख पाँच आयातित मालवस्तुहरूमा अन्य वस्तुहरू क्रमशः फलाम तथा इस्पात (आयात मूल्य रू. १०८ अर्ब ८२ करोड), मेशिनरी तथा सम्बन्धित उपकरणहरू (आयात मूल्य रू. ८९ अर्ब ७७ करोड), सवारीसाधन तथा पार्टपूर्जा (आयात मूल्य रू. ६९ अर्ब ८० करोड) र विद्युतीय उपकरणहरू (आयात मूल्य रू. ६५ अर्ब ७० करोड), प्लास्टिक तथा यसका सामग्री (आयात मूल्य रू. ४० अर्ब ४८ करोड) रहेका छन् । त्यसैगरी, खाद्यान्न बाली (आयात मूल्य रू. ४० अर्ब २१ करोड), बहुमूल्य धातु तथा पत्थरहरू (आयात मूल्य रू. ३९ अर्ब ३९ करोड), जीवजन्तुको बोसो तथा वनस्पतिको तेल (आयात मूल्य रू. २६ अर्ब ७ करोड) तथा औषधीय उत्पादनहरू (आयात मूल्य रू. २३ अर्ब २१ करोड), रहेका छन् । आयातित प्रमुख पाँच वस्तुको गत वर्षको आयातसँगको तुलनात्मक तथ्यांकीय स्थिति ग्राफमा देखाइएको छ । यस अवधिमा आयात गरिएका प्रमुख दश वस्तुहरूले कुल आयातको ६४ दशमलव ६१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
चालू आवको प्रथम ९ महीनामा सबैभन्दा बढी मूल्यको निर्यात भएको मालवस्तुमा जीवजन्तुको र वनस्पतिको बोसो तथा तेल शीर्षक अन्तर्गत (जसमा पाम आयलको हिस्सा सबैभन्दा बढी रहेको छ) रू. ७ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । यसको निर्यात गत वर्षको यसै अवधिमा रू. ११ करोडको मात्र भएको थियो । निर्यात वृद्धिदरका हिसाबले अति नै उच्च वृद्धि भएको छ । दोस्रोमा मानव निर्मित प्रमुख रेसाहरू (स्टेपल फाइबर्स) रू. ७ अर्ब २४ करोड बराबरको निर्यात भयो । यसमा गत वर्षको तुलनामा करीब २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तेस्रोमा कार्पेट तथा अन्य भुइँमा बिछ्याउने कपडा रू. ५ अर्ब ७६ करोडको (निर्यातमा ९ प्रतिशतले वृद्धि) भएको छ । चौथोमा रू. ५ अर्ब ६८ करोडको चिया कफीको निर्यात (निर्यातमा करीब १८ प्रतिशतले ह्रास आएको) भएको छ । पाँचौंमा फलाम तथा इस्पात रू. ४ अर्ब ९७ करोडको (३२ प्रतिशतले वृद्धि) निर्यात भएको छ । प्रमुख निर्यात हुने दश वस्तुहरुले मात्र कुल निर्यातको ६६ दशमलव ८८ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
चालू आवको चैत महीनासम्म (प्रथम नौ महीनासम्म) को राजस्व संकलन लक्ष्य रू. ३०१ अर्ब १४ करोड रहकोमा यस अवधिसम्म रू. २७० अर्ब ६२ करोड राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करीब २३ प्रतिशतले राजस्व संकलनमा वृद्धि भएको छ । चालू आवमा सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन सवारीसाधन तथा पार्टपूर्जाको आयातबाट भएको छ । चालू आवमा यसबाट रू. ६४ अर्ब ५४ करोड मूल्यको राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको रू. ५७ अर्ब ९२ करोड मूल्यको तुलनामा ११ दशमलव ४२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा कोइला आयातबाट संकलित राजस्व रू. ४७ अर्ब ३९ करोड छ जुन गत वर्षको रू. ३८ अर्ब २५ करोडको तुलनामा २३ दशमलव ९१ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै राजस्व संकलनका दृष्टिले क्रमशः तेस्रो स्थानमा रहेको फलाम तथा इस्पात २६ प्रतिशतले, चौथो स्थानको विद्युतीय उपकरण २६ प्रतिशतले तथा पाँचौं स्थानको मेशिनरी तथा सम्बन्धित उपकरण आयातबाट संकलन हुने राजस्वमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । छैटौं स्थानमा आयात भएको प्लास्टिक तथा यसका सामग्रीबाट संकलित राजस्वमा करीब २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सातौं स्थानमा आयात भएको सिमेन्ट तथा क्लिंकरबाट संकलन भएको राजस्वमा भने करीब ३६ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । चालू आवको प्रथम ९ महीनामा संकलित कुल राजस्व रकमको करीब ६४ प्रतिशत राजस्व हिस्सा प्रमुख सात वस्तु आयातबाट संकलन भएको छ ।